FSX Okwu Boeing 747-400 Aerolineas Argentinas Speedbrake
FSX Okwu Boeing 747-400 Aerolineas Argentinas Speedbrake 2 afọ 4 izu gara aga #1112
Ndewo, ndị mmadụ! Enwetarala m nke ugbu a FSX Ihe ngwugwu B747-400 Aerolinias Argentinas. Ihe niile dị mma, belụsọ mgbe m ga - ebugharị draịva ahụ ka ọ daa nwayọ na otu esi agbada, ọ naghị akwụsị ụgbọelu ahụ. Ọ na - ebugharị ya n'ụzọ zuru oke, mana ọ dị ka enweghị mmetụta na ọsọ ahụ. Ọzọkwa, arụ ọrụ kacha nta dị ihe dị na 31% yabụ ịchọta usoro ọsọ sitere na aghụghọ dị ukwuu iji chịkwaa. A ga-anabata echiche ma ọ bụ enyemaka ọ bụla iji merie nsogbu ndị a.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: fmartinez
Oge ike page: 0.154 sekọnd